Gbanwee email Instagram - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 31/05/2022 08:28 | Nkuzi
Ọtụtụ oge anyị na-eji email na-emepụta profaịlụ netwọk mmekọrịta nke anyị mechara kwụsị iji. Nsogbu bụ na, ọ bụrụ na netwọk mmekọrịta nwere naanị email ahụ, ị gaghị enweta ọkwa, yana ị ga-enwekwa nsogbu ịkọrọ ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya. Maka nke a, anyị ga-elekwasị anya na netwọkụ wee jụọ gị: ị maara ka esi agbanwe email Instagram?
O nwere ike ịbụ na ị nọwo na-achọsi ike ma mara ebe ị ga-eme ya, mana ikekwe ọ bụ na ị maghị etu esi eme ya. Echegbula onwe gị, anyị ga-enyere gị aka ugbu a.
1 Gịnị kpatara ịgbanwe email Instagram
2 Otu esi agbanwe email Instagram site na ngwa
3 Gbanwee Instagram email na kọmputa
4 Gbanwee email Instagram na-abanyeghị akaụntụ ahụ
Gịnị kpatara ịgbanwe email Instagram
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji gbanwee email Instagram gị.. O nwere ike ịbụ n'ihi na e mebiela akaụntụ email gị, n'ihi na ị chefuola paswọọdụ gị, n'ihi na ị naghị eji ya ... N'ezie, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla mere ị ga-eji gbanwee ya na netwọk mmekọrịta, ọ bụghị naanị na. Instagram.
Nsogbu bụ na, gafere mgbe anyị debanyere aha, ọtụtụ amaghị kpọmkwem ihe ha ga-eme iji gbanwee ya. Ma nke a bụ ihe anyị ga-agbalị ịgbanwe.
Otu esi agbanwe email Instagram site na ngwa
Dị ka ị maara, Instagram ugbu a na-enye gị ohere ịbanye na ngwa mkpanaka (nke kachasị mfe na ngwa ngwa), ma ọ bụ site na kọmputa. N'ikpeazụ ị nwere ihe niile nwere oke oke, mana m ga-ahapụ gị ka ị gbanwee ya. Ugbu a, ka anyị gaa nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Lee ị nwere ntuziaka ka ịgbanwe ya site na ngwa. Kedu ihe ị ga-eme?
Nke mbụ, mepee Instagram na mkpanaka gị. Ozugbo emepere, gaa na profaịlụ gị. Ozugbo n'ime, chọọ nhọrọ "Dezie profaịlụ"..
Ọ bụrụ na ị ṅa ntị, email gị ga-apụta na ozi profaịlụ. Ọ bụrụ na ọ pụtaghị, mgbe ahụ, ị ​​ga-abanye na nhọrọ kọntaktị ma ọ ga-apụta n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwetaghị ihe ọ bụla, wee pịa Ntọala Ozi Nkeonwe. Email nke i debanyere akaụntụ ahụ ga-apụta ebe ahụ. Na ihe anyị chọrọ ime bụ ịgbanwe ya. Kedu?
Pịa na adreesị ozi-e. Nke a ga-enye gị ohere ihichapụ email ị nwere wee tinye nke ọhụrụ ị chọrọ. Ozugbo ị nwetara ya, pịa bezel aka nri elu ka ị nabata mgbanwe ahụ.
Instagram ga-ezitere gị email na email ọhụrụ gị iji gosi na ị chọrọ n'ezie akaụntụ ahụ ugbu a, yabụ ị ga-enye njikọ ahụ n'ihi na, ọ bụrụ na ị mataghị ya, ị gaghị enwe ike iji email ahụ nweta ya.
Gbanwee Instagram email na kọmputa
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ahọrọ ime nke a site na kọmputa, mara na ị nwekwara ike ime ya. Na dịkwa mfe. N'ezie, ọ bụ ịgbaso otu usoro ahụ anyị gosipụtara na mbụ, mana na nke a site na kọmputa. Ya bụ:
Tinye akaụntụ Instagram gị na kọmputa.
Gaa na profaịlụ gị.
Pịa profaịlụ dezie.
Usoro data ga-apụta dị ka webụsaịtị, akụkọ ndụ, mmekọahụ… na email.
Pịa ebe ọ dị, hichapụ ma tinye ọhụrụ.
Instagram ga-ezitere gị ozi email iji nyochaa mgbanwe ahụ na mgbe ịmechara ya, a ga-eme usoro niile.
Gbanwee email Instagram na-abanyeghị akaụntụ ahụ
Otu n'ime aghụghọ ndị Instagram nwere bụ ohere ịgbanwe email na-enweghị n'ime akaụntụ. Nke a nwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ekwentị mkpanaaka gị efunahụla, ma ọ bụ naanị n'ihi na ị nwere akaụntụ ndị ọzọ na ị chọghị ma ọ bụ enweghị ike iji nke ahụ.
Ọ bụrụ na ọ mee gị, ihe ndị ị ga-eme malite site na imepe ngwa Instagram. Ọ bụrụ na ị na-ele anya, mgbe ọ na-arịọ maka ịnweta data gị, na-enye gị ohere ịnweta enyemaka, n'okpuru bọtịnụ ụlọ. Pịa ebe ahụ.
Ugbu a, Ọ ga-ajụ gị maka email gị, nọmba ekwentị, ma ọ bụ aha njirimara. nke akaụntụ Instagram nke ịchọrọ ịgbanwe email ahụ.
Ọ ga-enye gị ọtụtụ nhọrọ: Nweta ozi-e (na akaụntụ ejikọrọ), ozi ederede (SMS), ma ọ bụ malite na Facebook. Dabere na ihe ị na-ahọrọ, ọ ga-abụ karịa ma ọ bụ obere ngwa ngwa.
Ị ga-enweta ihuenyo ọhụrụ ebe ị nwere ike ịgbanwe paswọọdụ na, n'oge enyere, ọ ga-egosi gị email o nwere. Nke ahụ bụ ebe ị ga-ehichapụ nke ị nwere ma tinye nke gị, ma ọ bụrụ na ọ nwekwara ike ịbụ nọmba ekwentị gị.
Ozugbo ị kwadoro ihe niile ị ga-eme.
N'ezie, ihe ị na-eme bụ na Instagram na-eche na ị naghị echeta paswọọdụ, ọ bụ ya mere ị na-eme usoro a, mana n'eziokwu, ebumnuche gị bụ ịgbanwe email na-abanyeghị na akaụntụ ahụ. Mana ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịbanye na akaụntụ gị ugbu a yana ịkwesịrị ịgbanwe ozi ngwa ngwa.
Ugbu a ịmara ka esi agbanwe email Instagram, mgbe ịchọrọ ya, ị ga-ama ihe ị ga-emerịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Nkuzi » Gbanwee email Instagram